Ithegi: Umakhi wePhulo likaGoogle Uhlalutyo lukaGoogle | Martech Zone
Maka: Umakhi wePhulo likaGoogle Uhlalutyo lukaGoogle
UziLandela njani ngokuGuqukayo kunye nokuThengisa kwiNtengiso ye-imeyile
NgoLwesithathu, Aprili 28, 2021 NgoLwesithathu, Aprili 28, 2021 UDmytro Spilka
Ukuthengisa nge-imeyile kubaluleke kakhulu kuguquko lokusebenzisa njengoko bekusoloko kunjalo. Nangona kunjalo, abathengisi abaninzi basasilela ukulandelela ukusebenza kwabo ngendlela enentsingiselo. Indawo yokuthengisa iye yavela ngesantya esikhawulezayo kwi-21st Century, kodwa ngalo lonke ixesha lokunyuka kweendaba zosasazo, i-SEO, kunye nokuthengisa umxholo, imikhankaso ye-imeyile ihlala ihleli iphezulu kwikhonkco lokutya. Ngapha koko, iipesenti ezingama-73 zabathengisi basajonga ukuthengisa nge-imeyile njengeyona ndlela isebenzayo
Iphulo likaGoogle loPhononongo loMakhi woPhononongo
NgoLwesithathu, Matshi 31, 2021 NgoLwesibini, Meyi 11, 2021 Douglas Karr
Sebenzisa esi sixhobo ukwakha i-URL yoPhulo lweGoogle. Le fom iqinisekisa i-URL yakho, ibandakanya ingcinga yokuba ingaba sele inombuzo ngaphakathi kuyo, kwaye yongeza zonke izinto eziguquguqukayo ze-UTM: utm_campaign, utm_source, utm_medium, kunye nokhetho utm_term kunye utm_content. Ukuba ufunda oku nge-RSS okanye nge-imeyile, cofa ungene kwisiza ukuze usebenzise isixhobo: Ungayiqokelela njani kwaye uyiKhangele kwiDatha yePhulo kuHlaziyo lukaGoogle Nantsi ividiyo ecwangcisiweyo